ဝါသနာရှင် Brush မိတ်ကပ်, အပြာရောင်မိတ်ကပ် brush, Professional ကမိတ်ကပ် Brush Kit ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
Air ကိုကူရှင် Puff
 လျ：86-769-87773216 အီးမေးလ်ပို့ရန်：sales@yacaicosmetic.com
ဖေါ်ပြချက်:ဝါသနာရှင် Brush မိတ်ကပ်,အပြာရောင်မိတ်ကပ် Brush,Professional ကမိတ်ကပ် Brush Kit,14Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,,
brush သတ်မှတ်မည် >
3pcs Brush သတ်မှတ်မည်
5pcs Brush သတ်မှတ်မည်
6pcs Brush သတ်မှတ်မည်
7pcs Brush သတ်မှတ်မည်
8pcs Brush သတ်မှတ်မည်
9pcs Brush သတ်မှတ်မည်
10pcs Brush သတ်မှတ်မည်
12pcs Brush သတ်မှတ်မည်
14pcs Brush သတ်မှတ်မည်
17pcs Brush သတ်မှတ်မည်
18pcs Brush သတ်မှတ်မည်
20pcs Brush သတ်မှတ်မည်
လူပျို Brush >
Home > ထုတ်ကုန်များ > brush သတ်မှတ်မည် > 14pcs Brush သတ်မှတ်မည်
14pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဝါသနာရှင် Brush မိတ်ကပ်, အပြာရောင်မိတ်ကပ် Brush ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Professional ကမိတ်ကပ် Brush Kit R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
14pcs Professional ကမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်ဖျ Synthetic ဆံပင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
14pcs Professional ကမိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်ဖျ Synthetic ဆံပင်
ထုပ်ပိုး: သင့်ရဲ့တောင်းဆိုထားသော Per အဖြစ်
Supply နိုင်ခြင်း: 20000 Set/Sets per Month
အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြီး, အမှုန့်ဖြီး, မျက်စိအရိပ်ဖြီး, မျက်စိကှနျ့ဖြီး, မကျြတောငျမှေးဖြီးအပါအဝင်: PRO မိတ်ကပ် SET ဝှေ့နေတယ်။ အဆင်းလှသောမျက်နှာနှင့်မျက်စိမိတ်ကပ် application ကိုထုတ်လုပ်မှအရည်, အမှုန့်သို့မဟုတ်မုန့်ဘို့အပြီးပြည့်စုံသော အသားအရေ-touch...
တရုတ်နိုင်ငံ 14pcs Brush သတ်မှတ်မည် ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် 14pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ ဝါသနာရှင် Brush မိတ်ကပ်,အပြာရောင်မိတ်ကပ် Brush,Professional ကမိတ်ကပ် Brush Kit,14Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် 14pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ 14pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် ဝါသနာရှင် Brush မိတ်ကပ်,အပြာရောင်မိတ်ကပ် Brush,Professional ကမိတ်ကပ် Brush Kit,14Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ 14pcs Brush သတ်မှတ်မည် အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
Professional ကအလှကုန်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
Professional ကပရီမီယံအလှကုန် Tool ကို
Eyeshadow Brush Set မိတ်ကပ်မျက်လုံး Brush သတ်မှတ်သည်
အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော 7pcs အလှကုန် Mini Makeup Brush Set
ခရီးသွားများအတွက် Mini 7pcs Makeup Brush Set
စက်ရုံတိုက်ရိုက်အရောင်းရွှေအရောင် Mini ကိုမိတ်ကပ် Brush
6 PCs mini ကိုခရီးဆောင်ခရီးသွားမိတ်ကပ်ဖြီး
Powder အကြီးစား Professional ကမျက်နှာ Brush ရောစပ်
Petal Brush Flat Trace ဖောင်ဒေးရှင်းမရှိပါ
ပန်းရောင် Kakubi Lttle အမှုန့် Brush လူပျို
ပျော့ပျောင်းသောအလှကုန်ပစ္စည်း Air Cushion Powder Puff
Non-latex ရေမြှုပ် BB Cream Air Cushion Puff
မိတ်ကပ်ရေမြှုပ် Air ကိုကူရှင် Puff
နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသော Grey Color Makeup Puff
သစ်သား set 7PCS သောကျောက်တို့သည်စပါးကိုမိတ်ကပ်ဖြီး
ဝါသနာရှင် Brush မိတ်ကပ် အပြာရောင်မိတ်ကပ် Brush Professional ကမိတ်ကပ် Brush Kit 14Pcs Brush သတ်မှတ်မည် ဝါသနာရှင်မိတ်ကပ် Brush
မူပိုင်ခွင့်© 2020 DONGGUAN YACAI COSMETICS CO.,LTD. All rights reserved ။